Madora ane dovi iwe! | Kwayedza
Madora ane dovi iwe!
25 Jan, 2019 - 00:01	 2019-01-24T18:55:53+00:00 2019-01-25T00:01:40+00:00 0 Views
ZVIRI MUGAPU NA MUCHANETA CHIMUKA
MADORA ane dovi kudya namambo chaiko kana usavi uhu huchinge hwabikwa zvemandorokwati uye kunopa utano hwakanaka kumuviri.Svondo rino Anesushe Mudereri wekuZhombe anotsanangudza mabikirwo emadora ane dovi.
Poto, pani kana chikari, mugoti, chipunu, makapu maviri emadora, hanyanisi imwe chete, matomatisi maviri, zvipunu zviviri zvedovi, munyu nemvura.
Gadza poto, pani kana chikari pamoto woisa makomichi matatu emvura.
Suka madora nemvura inopisa wodurura mupoto wokwidibira.
Rega zvimbokwata kweawa imwe chete, isa hanyanisi, matomatisi nedovi.
Chitora mugoti wokurunga kuti zvinyatsokwata zvakanaka.
Isa munyu mushoma, raidza kuti zvanyatsonzwira munyu zvakanaka here wochizobura.
Usavi uhu munogona kudya nesadza remhando yamunoda.